एदी ,तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको आउने भविष्य ? – News Nepali Dainik
एदी ,तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको आउने भविष्य ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०२, २०७७ समय: २०:५७:११
भर्खरै हत्केलामा ह रेखाको बारेमा जानकारी र यस्तो रेखा हुनेहरुको भाग्यको बारेमा गरिएको एक रिर्सच गरिएको थियो मास्को यूनिभर्सिएटीमा । उक्त रिर्सचले एक पेपरनै निकालेको छ ।
Last Updated on: February 14th, 2021 at 8:57 pm
१६७२८ पटक हेरिएको